“Somali cid iiga sukeysa ma jirto” Muuqaalka Sedexaad ee Xuseen – Calan Qaran
August 18, 2016	by Shakra Hussein
“Somali cid iiga sukeysa ma jirto” Muuqaalka Sedexaad ee Xuseen
Xuseen Maxamed Cabdulle waa walaal Soomaaliyeed oo 2-muuqaal oo ku saabsan uu Calan Qaran sii baahiyay, waxaana daawatay Soomaali badan oo u soo doceeyey inuu ilaahay caafiyo, qaar lacag u soo diray iyo qaar muuqaalkiisa share gareeyey si’ walaalaha kale u saacidaan.
Xuseeen waa nin da’ dhexaad ah, wuxuu noo sheegay inuusan heysan cid kaga sukeysa Soomaalida oo wax u qabaneysa, wuxuuna kaalmadiinii hore ku tagay cisbitaallo baaray xanuunkiisa, wuxuuna soo qaatay dawooyin wax badan ka badalay noloshiisa.
Allah mahad leh oo inta badan xanuunka ka dul qaaday laakiin mar dhow ayuu qalliin gali doonaa waxaana loo sheegay in kharash badan ku bixi doono qalliinkaas, sidaas ayuu Soomaalida ugu soo gacan hoorsaday.
Qof kastoo caafimaad qaba maalin buu xanuunsan, keenna xanuunsan Allah shaafin kara lkn inaan ku dadaalno waa lama huran, walaal hadii aadan shilin siin karin share garey muuqaalkiisa.
Calan Qaran, Ku Ciil bax Codkaagaa